> Resource > iPad > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Samsung Galaxy S3 in iPad
Iyada oo shaashad weyn iyo xallinta sare, iPad ku siiyo khibrad fiican si loo qadariyo sawiro ku yaal. Sidaas darted, haddii aad ka heli kumanaan sawiro aad Samsung Galaxy S3, waxaa laga yaabaa inaad Ma sugi karo inaan iyaga wareejiyo iPad. Si aad u samaysid iyada, waxaad leedahay laba xal in la raaco.
Habka 1: sawiro Transfer ka Samsung S3 in iPad la MobileTrans 1 click
Habka 2: sawiro Nuqul ka Galaxy S3 in iPad la Lugood
Habka 1. Transfer sawiro ka Samsung S3 in iPad la MobileTrans 1 click
Faa'iido: Simple, degdeg ah oo nabdoon. No khasaaro. Qasaarooyinka: Ma lacag la'aan ah.
Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac waxaa loo arkaa qalab kala iibsiga phone hal-click. Sidaa daraadeed, aad sawiro ka Samsung Galaxy S3 in iPad wareejin karaa hal click, Oo aad dhawrtid photos hadda jira ee iPad isku mar. Qaybta hoose ayaa kuu sheegayaa sida loo isticmaalo MobileTrans ah si ay u gudbiyaan dhammaan sawirrada Samsung Galaxy S3 in iPad macruufka aad orodka 9/8/5/6/7.
Hadda, download barnaamijka si ay u dhoofiyaan sawir ka Samsung S3 in iPad (iPad Pro, iPad Mini 4, iPhone 6S / 6S Plus ka mid ah). Halkan, aynu isku dayi version Windows ah.
Tallaabada 1. Orod MobileTrans ee kombiyuutarka
Bilowga aad, ordo barnaamijka kombiyuutarka dib markii la rakibey la soo gabagabeeyo. In uu furmo suuqa hoose, u tag Phone in hab Transfer Phone.
Fiiro gaar ah: La soco in Lugood ee lagu rakibo kombiyuutarka in la damaanad qaado MobileTrans shaqeynayo.
Tallaabada 2. Isku aad Samsung Galaxy S3 iyo iPad in kombiyuutarka
Connect Galaxy S3 Samsung iyo iPad in kombiyuutarka la fiilooyinka USB. MobileTrans Si toos ah iyaga lagu ogaan doonaa, oo aan u muujiyo in uu furmo suuqa kala iibsiga.
Sax xogta oo cad ka hor inta nuqul marka aad u muuqdaan in ay ka saarto oo dhan photos hadda jira ee iPad in keliya maahee kuwa ka Samsung Galaxy S3.
Fiiro gaar ah: Guji Flip haddii aad jeceshahay in aad sawirrada ka soo diri iPad in Galaxy S3.
Tallaabada 3. photos Nuqul ka Galaxy S3 in iPad
Guji Start Copy iyo kala iibsiga sawir bilaabmin. Markaas, wada hadal kala iibsiga sawir soo baxa, kaas oo bar horumarka aad ogsoon tahay boqolkiiba iibsiga sawirka. Marka iibsiga sawir la sameeyo, waxaad riixi kartaa OK la dhammeeyo.
Hambalyo! Photos waxaa soo guuriyeen in aad iPad hadda. Tubada Photos on your iPad si loo qadariyo sawirada farxad leh.
Habka 2. photos Nuqul ka Galaxy S3 in iPad la Lugood
Faa'iido: Free. Qasaarooyinka: gaabis ah iyo in yar oo adag oo ah. Photo khasaaro.
Lugood loo abuuray si ay u maareeyaan dhammaan faylasha on your iPad, iPod iPhone iyo. Iyada oo ay caawimo, kuu soo gudbin karaa sawiro Samsung Galaxy S3 by syncing.
1. Isku aad Samsung Galaxy S3 iyo iPad in kombiyuutarka via fiilooyinka xogta USB.
2. Fur drive disk ee Samsung Galaxy S3 ku on your computer, iyo dhoofiyaan photos doortay inay folder sawir.
3. Run Lugood. Ka dib markii la ogaado, content aad iPad ayaa la soo bandhigi doonaa on galeeysid bidix ee suuqa kala Lugood ah.
4. galeeysid bidix, guji si aad iPad si ay u muujiyaan suuqa kala maamulka iPad on Murayaad saxda ah. Markaas, guji Photos on line ugu sareeya.
5. Sax nidaameed Photos ka > Choos ... > Dooro Folder . Browse your computer si aad u hesho folder sawirka. Riix Codso ee geeska hoose ee midig. Marka uu furmo suuqa yar booda, aad weydiinaya in aad rabto in aad ka saarto oo dhan photos hadda jira ee iPad iyo hagaagsan kuwa si ​​aad iPad, waa in aad guji saar oo nidaameed .
6. Sug ilaa nidaamka hagaagsan la dhamaystiro. Markaas, sawiro ku saabsan Samsung Galaxy S3 noqon doontaa iPad.
Inkastoo Lugood shaqaysaa si fiican syncing sawiro si aad iPad, weli waxbay ushafeeci idanka la dhaafi karin qaar ka mid ah. Mid ka mid ah waa in ay ka saaraysaa oo dhan photos jira Library Photo ah mar kasta oo aad syncing photos in iPad. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan doontaa in khasaare sawir weyn, sawiro ku saabsan iPad gaar ahaan marka ay yihiin asalka ah.
Sida loo sii qulquli Movies in iPad la Loss No